Iindaba - Zeziphi iipropathi zokungangeni kwamanzi kunye neembrane eziphefumlayo zophahla lwesakhiwo sendlu yamaplanga
Kwindlu yokwakhiwa kwendlu yamaplanga, ukwenzela ukuba kuqinisekiswe ukuba indlu yokhuni inepropati efanelekileyo engenamanzi kunye nokuphefumula, ngoku wonke umntu usebenzisa i-membrane engenamanzi kunye nokuphefumula ngaphandle kwendlu yokhuni. I-membrane engangeni manzi kunye nephefumulayo esetyenziswa ekwakhiweni kwendlu yokhuni yi-membrane ye-polyolefin eguquliweyo kunye nelaphu eliqinisiweyo elingalukwanga, elihlangabezana neemfuno zokhuseleko lwendalo jikelele.
1. Inokusebenza kakuhle kwamanzi, ikhusela ngokufanelekileyo umoya kunye nemvula ekuhlaseleni igumbi, kwaye iphucula induduzo yokuhlala. Inwebu ephefumlayo engangeni manzi ibizwa ngokuba yinwebu ephefumlayo. Inokuphefumula okugqwesileyo, okuvumela ukuba umphunga wamanzi ukhutshwe ngokukhawuleza, unciphise ukufuma kwangaphakathi, kwaye uyasebenza Kuphephe ukubunjwa kwesikhunta kunye nokudibanisa, ngaloo ndlela uphucula kakhulu induduzo yendawo yokuhlala kunye nokuphucula ukuqina kwesakhiwo.
2. Ukugcinwa kokushisa kokugcina amandla kunokuthintela ngokufanelekileyo ukungena komoya oshushu kunye obandayo ukufezekisa imisebenzi yokugcina amandla kunye nokugcina ukushisa. Isetyenziswe ngokudibeneyo noboya beglasi, inokuthintela ngokufanelekileyo umphunga wamanzi ukuba ungangeni kumaleko wokugquma kwaye wenze ukhuseleko olubanzi lomaleko wokugquma. Kwangaxeshanye, i-condensation ebangelwa ngumahluko weqondo lobushushu phakathi kwangaphakathi nangaphandle ingasetyenziswa kunye nomsebenzi olungileyo wokungena komoya we-membrane engangeni manzi kunye nephefumlayo ukukhupha umphunga wamanzi ngokukhawuleza ukuze kuqinisekiswe Isiphumo somaleko wokugquma sifezekisa umphumo wokonga amandla okuqhubekayo. .
3. Ukumelana nokukrazula, ukumelana nokunxiba, ukuguquguquka kobushushu obuphantsi.
4. Ineempawu ezintle kakhulu zokulwa ne-ultraviolet kunye ne-anti-aging. Emva kweenyanga ezintathu zokuvezwa kwangaphandle ehlotyeni, isagcina ukusebenza kakuhle kwemveliso, kwaye imveliso ihlala ixesha elide.
Ngokuqhelekileyo, i-membrane engangeni manzi kunye nephefumulayo esetyenziswa ngaphandle kwesakhiwo sendlu yokhuni ithambile, ilula kwaye incinci, ilula ukwakha, kwaye akulula ukushiya ikona efileyo ekwakhiweni. Xa uyisebenzisa, unokulandela isantya setekhnoloji kwaye uyisebenzise ngokufanelekileyo.
IVinyl Plank yoMgangatho woMvalo woMvalo, Umgangatho ongaphantsi koMgangatho woMphunga, Froth-Pak, Isithintelo soMphunga kuMacala omabini eInsulation, Ilaphu elingalukwanga, Umgangatho wangaphantsi odadayo,